माता कसरी बन्छ मान्छे ?
समाचार समाज जीवनशैली
विष्णु ढुंगाना काठमाडौं, १९ असार
केही दिनअघि आफूलाई ‘धर्तीमाता’ दाबी गर्ने विष्णु कुँवरले एक युवतीलाई ‘बोक्सी’को आरोप लगाउँदै दुव्र्यवहार गरेको भिडियो भाइरल भयो । यसपछि प्रहरीले कुँवरलाई पक्राउ ग¥यो ।
कथित धर्तीमातालाई प्रहरीले बालाजुबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । हिरासतमा रहेकी मातालाई सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेका बेला एक महिला प्रहरी हबल्दार पनि काम्न थालिन् ।
ती महिला प्रहरीले बोक्सी आरोपमा कुटाइ खाइरहेकी युवतीलाई माताबाट बचाएकी थिइन् । तर, प्रहरी नै काम्न थालेको समाचार बाहिरिएपछि मानिसले विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् ।
यस्तै, अर्जुन क्षेत्री ‘ज्योतिषी’ले जेठ अन्तिम साता ठूलो भूकम्प जाने भविष्यवाणी गरे । उनको भविष्यवाणीले सर्वसाधारणमा आतंक फैलियो । उनको भविष्यवाणी पनि झुटो साबित भयो । र, समाजमा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो ।
यस्ता घटनाका कैयौं उदाहरण छन् । साधुको नाममा, माताको नाममा, ज्योतिषीको नाममा र दैवी शक्ति प्राप्त भएको नाममा आफूलाई भविष्यवेत्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने धेरै भेटिन्छन् । त्यस्तै, ‘बोक्सा बोक्सी’को आरोपमा अमानवीय यातना सहन बाध्य व्यक्ति पनि असंख्य छन् ।
अर्काे रोचक कुरा के पनि छ भने साधु, जोगी, माता, दैवी शक्ति प्राप्त गरेका मनिस वा बोक्सा बोक्सी भनिएकाहरुले अस्वाभाविक हर्कत देखाएका पनि हुन्छन् । यस्तै, हर्कतका कारण सर्वसाधारणले उनीहरूबारे एक फरक धारणा बनाउँछन् र विश्वास पनि गर्न थाल्छन् ।
के मान्छेले दैवी शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ ? कोही मान्छे बोक्सा–बोक्सी वा माता–धामी आदि इत्यादि कसरी बन्छ ? यही विषयमा केन्द्रित भएर हामीले मनोचिकित्सक गोपाल ढकालसँग मानिस देवता बन्ने सम्भावनाबारे कुराकानी गरेका छौं ।
सामान्य मानिस माता वा देवता बन्न सक्छ ?
कसैमा माता चढ्नु वा अदृश्य शक्ति प्राप्त हुनु भनेको कपोकल्पित कुरा मात्रै हो । यसलाई अहिलेसम्म विज्ञानले प्रमाणित गरेको छैन । यसलाई मनोवैज्ञानिक रोग भनिन्छ ।
मनोवैज्ञानिक रोगका कन्भर्जन डिसअर्डर र मेनिया गरी दुई वटा अवस्था छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको धर्तीमाताको घटना मेनियासँग सम्बन्धित छ ।
मनोवैज्ञानिक रोग कन्भर्जन डिसअर्डरलाई हिस्टेरिया पनि भन्ने गरिन्छ । मानिसको मनभित्र कुण्ठित पीडा, डर, भय, चिन्ता, तनाव, कामेच्छा जस्ता विषय अत्यधिक भएपछि त्यो विस्फोट भई बाहिर निस्कन्छ । र, त्यो शारीरिक लक्षणका रूपमा देखा पर्छ ।
त्यसपछि मानिसले अनौठा हर्कत देखाउन थाल्छ । काम्ने, बर्बराउने, विभिन्न भाषा बोल्ने, आफैंलाई चिथोर्नेलगायतका गतिविधि गर्न थाल्छ । हप्ता, महिना वा वर्षमा एकपटक यस्तो अवस्था देखा पर्छ । तर, लामो समय रहँदैन । यसको लक्षण यस्तै हो भन्न सकिँदैन । यस्तो रोगलाई सामान्य काउन्सिलिङबाट निको पार्न सकिन्छ ।
अर्काे प्रकारको मनोवैज्ञानिक रोगलाई मेनिया भनिन्छ । यो पहिलोभन्दा निकै खतरनाक हुन्छ । यसमा मनिसले आफूमा अलौकिक शक्ति आएको दाबी गर्छ । यो पनि कुण्ठित पीडा, डर, भय, चिन्ता, तनाव, चाहना आदिकै कारण हुन्छ ।
मेनिया हुँदा उसका व्यवहार पहिलेको भन्दा निकै फरक देखिन्छ । उसका कुरा सुन्यो र उसलाई विश्वास ग¥यो भने खुसी हुन्छ, सुनेन भने रिसाउँछ । त्यस्ता मानिसमा उग्र जिद्दीपन देखिन्छ । आफू रोगी भएको कहिल्यै स्वीकार गर्दैन । मेनिया भएको मनिस आफूले भनेको कुरा भएन भने अरुको हत्या गर्न समेत पछि पर्दैन ।
मनोरोग लागेका मनिसमा अत्यधिक शक्ति देखा पर्छ । एक्लैले धेरै मानिसलाई परास्त गर्न सक्छ । विचार र बोल्ने कलालगायतमा परिवर्तन देखिन्छ । यो रोग लाग्दा मानिसमा पहिलेभन्दा बढी शक्ति प्राप्त भएको भान हुन्छ । अनुहारमा परिवर्तन आउँछ । त्यही परिवर्तनलाई हाम्रो समाजले देवत्वकरण गरिदिन्छ । र, यस्तो देवत्वकरणले रोगीको आत्मबल बढ्छ ।
उसले आफूलाई निकै क्षमतावान् वा भगवान् ठान्छ । र, त्यसैलाई पेसा नै बनाएर अघि बढ्छ । त्यसपछि ऊ माता वा देवता बन्छ । भद्रकालीमा भेटिएकी विष्णु कुँवरमा मेनियाको समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ ।
त्यसो भए महिला प्रहरी कसरी कामिन् त ?
हाम्रो समाजले बच्चैदेखि ‘बोक्सी, लागूभागू र माता’मा विश्वास गर्न सिकाएको छ । यो हाम्रो समाजको मनोविज्ञान हो । सानैदेखि नै यसमा हामी अभ्यस्त हुँदै आएका छौं ।
सातो गएको भन्दै सानैदेखि माता वा धामी झाँक्रीकहाँ लगेर झारफुक गर्ने वा सातो बोलाउने गरिएको हुन्छ । ती महिला प्रहरीमा पनि यस्तै कुनै प्रभाव सानैदेखि परेको थियो । कन्भर्जन डिसअर्डर महिलामा बढी हुन्छ ।
ती महिलाले भद्रकालीमा माता कामेको देखेकी थिइन् । त्यस्तो देख्दा उनमा डर र तनावको मात्रा बढेको हुन सक्छ । जसले कन्भर्जन डिसअर्डर भई उनी (महिला प्रहरी) कामेकी हुन् ।
समाजमा देखिने वीर, वायु, खली, धामी र झाँक्री पनि मनोवैज्ञानिक रोग हुन् ?
वायु चढेको समयमा पनि यस्तै लक्षण देखा पर्छ । मान्छे मर्नु आफैंमा दुःखद घटना हो । आफन्तको मृत्युले मानिसको मष्तिस्कमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । र, वायु बोलाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा मान्छे कन्भर्जन डिसअर्डरमा पुग्छ ।
जब उसको मनभित्र सञ्चित शक्ति विस्फोट हुन्छ, तब ऊ मरेको मान्छेको आवाज निकालेर काम्न थाल्छ । यसलाई नेपाली समाजले वायु भन्ने गरेको छ ।
नेपाली समाजमा अझै पनि खली खुवाउने चलन छ । खली खाने क्रममा मानिसले निकै आश्चर्यजनक काम गर्छ । खली खाने मान्छेहरू बलिरहेको आगोमा समेत नाच्छन् । यो पनि कन्भर्जन डिसअर्डरकै कारणले भएको हो ।
मानिसको दिमागमा तीन तह हुन्छन् । तिनीहरू चेतन, अर्धचेतन र अचेतन हुन् । अचेतन भागमा मानिसका दमित पीडा, इच्छा, चाहना, आवश्यकता आदि रहन्छन् । यसलाई चेतनले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । तर, अत्याधिक भएपछि यो विस्फोट हुन्छ । र, यसमा धेरै शक्ति हुन्छ ।
विस्फोटपश्चात् मानिस निकै शक्तिशाली बन्छ । त्यतिबेला उसलाई पोलेको पनि थाहा हुँदैन । र, आगोमा नाचिरहेका बेला छिटो–छिटो उफ्रिरहेको हुन्छ । आगोमा केही समय रोकिएपछि मात्रै आगोले पोल्छ, नत्र पोल्दैन । खली खाने मानिस तीव्र गतिमा आगोमा नाच्ने हुनाले उसलाई पोल्दैन । यसैलाई गलत व्याख्या गरिन्छ । र, अलौकिक शक्ति आएको भनी देवत्वकरण गरिन्छ ।
धामी झाँक्रीले झारफुक गरेपछि रोग निको भएका कैयौं उदाहरण छन् नि ?
पहिलो त हाम्रो समाजले धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्न सिकाएको छ । विश्वास आफैंमा औषधि हो । र धामी झाँक्रीले उपचार गरेपश्चात् उनीहरु भन्छन्, ‘अब केही हुँदैन, मैले उपचार गरेको छु । मैले भनेका काम गरेपछि सबै निको हुन्छ ।
चिन्ता लिनुपर्दैन ।’ उनीहरुले यसरी बिरामीलाई विश्वस्त पार्छन् । यसबाट मनोरोगीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श मिलिरहेको हुन्छ । अनि, रोग निको हुँदै जान्छ ।
त्यस्तै, धामी झाँक्रीले उपचारका क्रममा मन्त्र गाउने र ढ्यांग्रो बजाउँछन् । पछिल्लो समय विज्ञानले म्युजिक, स्मेललगायतका थेरापीबाट रोग निको पार्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ ।
धामी झाँक्रीले गाउने मन्त्र, बजाउने ढ्यांग्रो र मन्त्र उच्चारण गर्दा बालिने धुपबाट म्युजिक थेरापी र स्मेल थेरापी भइरहेको हुन्छ । जसले बिरामीले आराम महसुस गर्छ । त्यस्तै, केही धामीले खरानी खुवाउने वा घरेलु औषधि पनि खुवाउँछन् । त्यसकारण, झारफुकबाट पनि बिरामी निको भएका हुन् ।
धनी भए माता र गरिब भए बोक्सी ?
नेपाली समाजले गरिब, एकल महिला, पिछडा वर्गलगायतलाई सधैं अपहेलना गर्दैै आएको हुन्छ । जसले उनीहरूलाई निकै पीडा दिएको हुन्छ । जुन पीडाका कारण उनीहरूमा कन्भर्जनल डिसअर्डरको समस्या आउँछ । तर, समाजले त्यसलाई बोक्सीको उपमा दिन्छ ।
यस्तै, प्रकारको समस्या ठूला घरानाका महिलामा देखियो भने देवत्वकरण गरिन्छ । अलौकिक शक्ति आएको दाबी गरिन्छ । पूजा हुन्छ अनि ती महिला माता बन्छिन् ।
खासमा भन्ने हो भने कुनै पनि मानिस माता वा देवता बन्न सक्दैन । यो सबै मनोरोगको कारणले हुन्छ । सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र जैविक कारणले मानिसमा मनोरोग देखा पर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २०, २०७६, १२:०२:००